PinePhone Pro: nhau uye tekinoroji maficha | Linux Addicts
PinePhone Pro: nhau uye tekinoroji maficha
Pine64 yakaburitsa imwezve inonakidza nyowani smartphone modhi. Zviri pamusoro PinePhone Pro. Chimbo chenhare chakagadzirirwa vashandisi veLinux, uye vanoda rusununguko uye kuvanzika, vachitopa machinjiro anoshanda emuviri kudzima zvikamu zvakakanganisika senge maikorofoni, kamera kana modem. Haisi iyo Android, asi Manjaro system yeARM uye nePlasma Mobile.
Usatarisire kuti ichave imwe yeakanakisa nharembozha, uye haina kudhura, ndoda iyo ine yakanyanya kuita. Nekudaro, iyo nyasha chaidzo dzeiyi terminal ndiyo chaiyo inoshanda sisitimu, iyo kwete kusungirirwa kune Android kana GMS masevhisi, kufanana nevazhinji. Kunyangwe izvi zvakare zviine zvipingamupinyi zvayo, senge kudzikisira kwemaapplication auchawana kune ino system.
Izvo zvakakoshawo kuziva kuti iyo PinePhone Pro ine mamwe maekisi pasi pebhandi rayo, senge mukana we wedzera mabasa uchishandisa akasiyana modular housings. Nzira yekushandisa mamwe magajeti anowirirana nenzira iri nyore. Iwe unobva kumodule yekuwedzera kiibhodhi yekunze uye kushandura nhare kuita mini laptop, kuburikidza neLoRa module yeIoT, imwe bhatiri yekuwedzera kuzvitonga, imwe yekuwedzera rutsigiro rwekukurumidza kuchaja, nezvimwe.
Kana iri mutengo uye kuwanikwa, inogona kutotengwa kubva muna Gumiguru apfuura. Chete izvozvo zvisati zvaita $599 uye zvino vagadziri vayo vanopa iyo mutengo wekushambadzira we $399. Iwe unongofanira kuendaPine64's shopu.
Tekinoroji maitiro ePinePhone Pro
Kana ari tekinoroji maitiro ePinePhone Pro, kana hunyanzvi hwekuita, zvinova zvinonyanya kukosha pakusarudza nharembozha nyowani, modhi iyi inosanganisira zvinotevera:
Screen: 6″ IPS LED ine 1440 × 720 px resolution, 18:9 AR uye Corning Gorilla Girazi 4 kusimbisa.
SoCRockchip RK3399S ine 4 ARM Cortex-A53 CPU cores uye 2 yakakwirira-inoshanda ARM Cortex-A72 cores, pamwe neMali T860MP4 GPU.
Memory yepfungwa: 4 GB yekushandiswa kwakaderera LPDDR4 mhando RAM.
Self Storage: 128 GB ye flash memory mhando eMMC. Inogona kuwedzerwa kusvika ku2TB uchishandisa microSD makadhi.
Makamera: hombe 13MP ine Sony IMX258 sensor uye kumberi 8 MP ine Omnivision OV8858 sensor.
Ruzha: mono speaker uye 3.5mm minijack yekubatanidza mahedhifoni.
Kubatana: WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS yakabatanidzwa, uye data kuburikidza neLTE 4G ine microSIM.
Puerto: USB-C (Special USB 3.0) yedata uye kuchaja.
Chengetedzo: machinjiro emuviri ekuchengetedza anogona kubhadhara LTE/GPS, WiFi/BT, maikorofoni, makamera uye mahedhifoni.
Battery: Inobviswa 3000mAh LiIon ine 15W yekuchaja nekukurumidza.
Kukura uye uremu: 160.8×76.6×11.1 mm uye 215 magiramu.
Operating system: Manjaro Linux + KDE Plasma Mobile.
Kuwedzera: kuburikidza neakasiyana casings / zvishongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PinePhone Pro: nhau uye tekinoroji maficha
Deepin 20.4 yatovepo neLinux 5.15 uye kuvandudzwa muDDE, pakati pevamwe
GNOME 42 yatovepo mune alpha vhezheni, ine zvakawanda zvayo zvitsva zvine chekuita neGTK 4 uye libadwaita.